သငျသညျသမိုငျးကိုခံစားလျှင်ညုမြစ်ခရုဇ်ကိုယူ, လက်ရာမြောက်သောအစားအစာ, နှင့် မမေ့နိုင်သောအတွေ့အကြုံများ. အမ်စတာဒမ်၌ခေတ်မီမြို့မှတဆင့်ခရီးသွားခြင်း အနောက်ဥရောပ ဖြည်းဖြည်းချင်းအရှေ့ဥရောပသွားတာသို့ဆငျးသသောညုအပေါ် သမိုင်းဝင်အထင်ကရအဆောက်အ, ထိုကဲ့သို့သော Salzburg အဖြစ် (ဂီတ၏မြို့), သို့မဟုတ်ပျက်စီးခြင်းအရက်ဆိုင်သွားရောက်ချွတ်ခုန် ခေတ်မှီဘူဒါပက်. ဥရောပမြစ် cruises ဒီစုဆောင်းမှုအသစ်အတှေ့အကွုံမြားနှငျ့ပွညျ့စုံတစ် dreamlike အာကာသသို့သင်ပယ်ရှင်းမည်, ရူထောင့်များ, အသံ, အနံ့, and gastronomic encounters.
မြို့အတော်များများကသူတို့ကိုသတ်မှတ်ဖေါ်ပြတဲ့အင်္ဂါရပ်များ, သူတို့ရဲ့ဖြစ်တည်မှုကိုသတ်မှတ်ပါတယ်, နှင့်မြို့ကြီးများနှလုံးမှတဆင့် run သောသွေးခုန်နှုန်းအဖြစ်ပြုမူ. ပဲရစ်အတွက် Seine မြစ်မြစ် Thames လန်ဒန်ရန်ဖြစ်ပါသည်ဘာလဲ, ဘူဒါပက်ဖို့ညု. ဒါဟာငလျင်ဗဟိုချက်မှာဖြစ်ပါသည်, ခရီးသွား to ည့်ပြောင်းရွှေ့theရိယာ, သူတို့ကစောငျ့ရှောကျဘယ်မှာ နာမည်ကျော်ဆွဲဆောင်မှု and capture memories.
ငါတို့သည်သင်တို့စာသားကမ်းလှမ်း Seine cruises ့အကြောင်းကိုတစုံတယောက်သောသူသည်ရှေးခယျြနိုငျနှငျ့သငျစိတ်ပျက်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေထင်! သငျသညျပဲရစ်ရဲ့အကောင်းဆုံးကြည့်ရှုနိုင်ပါလိမ့်မည်, ချစ်ခြင်းမေတ္တာမြို့. သင့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုကျယ်ပြန့်အထိဖြစ်ပါတယ်. သင်အချိန်ကန့်သတ်ခဲ့ကြပါလျှင်, cruises အဲဒီမှာသင့်ရဲ့တိုတောင်းသောအချိန်သို့ fit မှရရှိနိုင်ပါသည်. တစ်ဦးထက်ပိုထားကြ၏-ပြန် Vibe များအတွက်, တစ်ဦး Seine ညစာခရုဇ်ကိုခံစား, အဆိုပါ Eiffel မျှော်စင်နှင့် Louvre ပြတိုက်အပေါ်သို့ကြည့်, သငျသညျခွငျးအားဖွငျ့ရွက်လွှင့်အဖြစ်. သို့မဟုတ်သင်တစ်ဦးသီးသန့် combo ဤဆွဲဆောင်မှုနှင့်ခရုဇ်ပေါင်းစပ်နိုင်ပါတယ်, ဒုတိယထပ်မှတက်, အမြင်များအရမ်းလေးစားမိပါတယ်, ပြီးတော့ တစ်လှေခရီးစဉ်ယူ, ခံစားညစာနှင့်တစ်ဦး စပျစ်ရည်ဖန်. သင်တို့သည်ဤမျှဖန်စီလျှင်သင်ပင် Moulin Rouge ပြပွဲအတွက်ယူနိုင်ပါသည်? အစစ်အမှန်ပဲရစ်ကြည့်ရှုရန်, တစ်ဦး Seine ခရုဇ်တစ်ဦးမဖြစ်မနေဖြစ်ပါသည်.
အဆိုပါအသေးစားမြစ်များ, တူးမြောင်း, နှင့်နယ်သာလန်၏ကုန်းတွင်းပိုင်းပင်လယ်များသည်ဒတ်ခ်ျရေလမ်းကြောင်းဖြစ်သည်, ဒီမှာဒီလိုမြင်ကွင်းဥရောပနှင့်သူမ၏သပိတ်မှောက်နိမ့်နိုင်ငံများကလေ့လာစူးစမ်းဖို့အပန်းဖြေနည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်. အမ်စတာဒမ်နှင့်ရိုတာဒမ်၏မြို့ကြီးများတဝိုက်လေ့လာရေးခရီးမကြာခဏခရီးစဉ်ပေါ်တွင်ပေါ်လာ, ဒါပေမယ့်တစ်ဦး၏မီးမောင်းထိုးပြ ဒတ်ခ်ျ Waterways မြစ်ခရုဇ် ၏စီးရီးဖြစ်ပါတယ် 19 Kinderdijk ၏ဒေသမှာရှိတဲ့တူးမြောင်းဘဏ်များတန်းစီနေစစ်မှန်လေရဟတ်. Get your cameras ready.
Keukenhof မှာပန်း display ကိုအညီအမျှအံ့သြဖွယ်ရှိပါတယ်, အကြီးဆုံးပန်းပွင့်ဥယျာဉ်တော်. အရောင်ပြိုးပြိုးပြက်ပြက်ကော်ဇောခုနစ်သန်း tulips အသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးနေကြတယ်, daffodils, နှင့်အခြားအပွင့် - Aprilပြီလနှင့်မေလအတွင်းသူတို့ရဲ့ခမ်းနားအကောင်းဆုံးမှာ. အထူးသဒတျချြမီးသီးလယ်ကွင်းအပေါ်အာရုံစူးစိုက်နှစ်စဉ်ဒီအချိန်မှာတိုတောင်း cruises ထွက်သည်ကိုကြည့်ရှု.
အားလုံးပေါ်တွင်! သင်၏မြစ်ခရီးဖြင့်လက်မှတ်ကိုလေ့ကျင့်သောစာအုပ် တစ်ဦးကရထား Save ဒီနေ့နှင့် cruise ရရှိသွားတဲ့!
လုပ်ချင်တိုင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်ပို့စ် “5 Explore ရန်ဥရောပမှာတော့အများစုကတင့်တယ်မြစ်ချောင်းများ” သင့်ရဲ့ site ကိုပေါ်ကို? သင်တို့သည်ငါတို့၏ဓါတ်ပုံနှင့်စာသား ယူ. ရုံဤ blog post မှ link တစ်ခုနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုအကြွေးကိုပေးနိုင်ပါသည်ဖြစ်စေ. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fmost-beautiful-rivers-europe%2F%3Flang%3Dmy- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
ဗြိတိန်နိုင်ငံခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားဒိန်းမတ်, ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားဟော်လန်, ရထား Travel အီတလီ, ပေါ်တူဂီရထားခရီးသွားလာ, Train Travel စကော့တလန်, ရထားခရီးသွားစပိန်, ရထားခရီးသွားအဆိုပါနယ်သာလန်, ရထားခရီးသွားယူကေ, ဥရောပခရီးသွား, အိုက်စလန်သို့သွားပါ